သတင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » သတင်း
Posted by ချစ်ရင်ထူး II on May 27, 2012 in Copy/Paste | 28 comments
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အလှူက ဧရာဝတီ သတင်းဂျာနယ်ထဲမှာ ပါလာတယ်ဗျ ..
ဧရာဝတီ ဂျာနယ် စာမျက်နှာ ၂၃
သိပြီးသားလူတွေလည်းရှိ မှာပါ .. မသိသေးတဲ့လူတွေအတွက် တင်ပေးလိုက်တာပါ ..
အဲဒါထက် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဓါတ်ပုံပြပွဲက ဒီနေ့ နောက်ဆုံးနော် .. မပို့ရသေးတဲ့ ဆရာများ မေ့နေမှာစိုးလို့ပါ ..
ဦးဆောင်သူများနဲ့ပါဝင်သူများအားလုံး အတွက် သာဓု အခါတစ်ရာခေါ်ပါတယ်ဗျား
နောင်လဲ များများ လှူနိုင်ကြပါစေ
ဝမ်းသာစရာ သတင်းပါပဲဗျာ ..
ကျနော်တို့ အလှူက ဂျာနယ်ထဲတောင် ပါလာတယ်ဆိုတော့ …
အဲဒီဂျာနယ် သွားပြီး ရှာဝယ်လိုက်ဦးမယ်ဗျို့ … ကျေးကျေး …
သတင်းပေးတာ ကျေးဇူးပါ။ အဲဒီသတင်းဘယ်မှာပါသလဲဆိုပြီး သိချင်ဖတ်ချင်နေတာ။
၀မ်းသာစရာပါပဲလား။ သတင်းရေးတဲ့ လူ သို့မဟုတ် ပေးတဲ့သူ ဘယ်သူလဲ မသိပေမဲ့.. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
အိမ်ကို ကြွားပြီး မုန့်ဖိုးတောင်းမယ်
ဒီသတင်းကို ရေးတာကတော့ ကိုကမ်းနဲ့ ဆရာထက်ဝေးတို့ ဖြစ်မယ်ဗျ။သူတို့ကဘဲ ဒါကိုဂျာနယ် မှာထည့်ပေးကြပုံရတယ် ကျေးဇူးပါ။နောင်လည်း ဦးဆောင်သူတွေနဲ့အတူ လှူဖို့ အားခဲထားပါကြောင်း…။
ဂျာနယ်မှာပါတာက သတင်းရေးသူ အေးအေးမွန်တဲ့ ဘူကြီးတုန်း။ ဓာတ်ပုံနဲ့ သတင်းကို မှုခင်းမှာလည်း ပါတယ်ပြောတယ်
လူဂျီးတွေ ကျော်ပြီးတော့တောင်..ကျုပ်နာမည်ဂျီးက ထိပ်ဆုံးက ပါလား ဟရို့ …. (ဖက်နမ်း သလိုပါပဲကွယ်…)
ဖားတပိုင်းငါးတပိုင်း ရွာ့ ဆယ်လစ်ဗျစ်တီ ကွ….
သများ ဒါ့ပုံ သုံးတယ်.. သများကိုလည်း ခွက်ဒစ်မပေးဘူး ..(ပါးပိတ်ချသလိုပါပဲကွယ်…)
ခုဖက်နမ်းလိုက် ခုပါးပိတ်ချလိုက် ဆောင်းပါးလို့ပဲ မြင်မိပါဂျောင်း…
ပုံတွေကလည်း ဘယ်သူမှ မတက်ကြသေး
ကိုပေါက်က လည်း အရေးတကြီးပုံတွေ လှမ်းပေး
တိုက်နှစ်တိုက်စာအတွက် (ခင်ဗျားပုံကလည်း ဂရုပုံဆိုတော့)၊ ကိုပေါက်ပုံကို မသုံးဖြစ်လိုက်ဘဲ ခင်ဗျားပုံကိုပဲ…
စီဒီတစ်ချပ်စီခုတ်ပြီး တိုက်ကို ပြေးလိုက်ရတယ်..
အရေးထဲ ကံဆိုးချင်တော့ တိုက်ပိတ်သွားလို့ နောက်တစ်နေ့မှ
အဲဒီအတွက် ခွက်ဒစ်ပေးဖို့တွေ ဘာတွေ ပြောဖို့ မေ့တွားတယ်ဂျာ…
ပါးတော့ မချရက်ပါဘူး .(အာဟင့် တစ်ထောင်ချိလို့.နောက်ထှာ….)
sai khunsai says:
အ အာ အိ အီ
အု အူ အေ အဲ
အော့ အော် အံ အား …
နောက်က ဟာတွေများ ကျန်ခဲ့သလားလို့ပါ ..
ဂျာနယ်မှာ သတင်းပါတဲ့ ကိစ္စမှာ ပထမဆုံး အေးအေးမွန်ဆိုတာကို အရင်ရှင်းပြပါရစေ။ ဒါက
ကိုကမ်းဝေးကို ပို့ ခိုင်းလိုက်တာပါ ။ ကိုကမ်းဝေးက တော်တော် ဖျားနေပါတယ် ။ကျွန်တော် က ခဏခဏမေးလွန်းလို့ နေမကောင်းတာတောင် သူသွားခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်က မအေးအေးမွန်
နာမည်နဲ့ ပေးထားလိုက်ပါလို့ ဆိုခဲ့ပါတယ်။ မှုခင်းဂျာနယ် က မှုခင်း အပြင် ထူးခြား သတင်းတွေ ထည့်ပါတယ်။ကို ဗညားနာမည်နဲ့ ပေးခဲ့လို့ ပြောမိပါတယ် ကျွန်တော်တို့က စာပေနယ်မှာ
ကိုကမ်းဝေးက ကဗျာဆရာပါကျွန်တော်ကလည်း ၀တ္ထုတိုနဲ့ ကဗျာရေးတာပါ။ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့ နာမည် မတပ်ခဲ့တာပါ။( မင်နီ ပေးလိုက ပေးကြပါ)။ အချိန်လုရတဲ့ အတွက် အခြားဂျာနယ်မှာ မပါတာ ခွင့်လွှတ်ပေးပါလို့တောင်းပန်ပါတယ်။
သတင်း ထည့်မယ်ဆိုတာ အလှူရက်ထဲက ဆရာမ (မမ)ကို ခွင့်တောင်းခဲ့ပါတယ်။သတင်းမှာက လူကုန်နာမည် ရေးလို့ မရဘူးလေ။ ဒါကြောင့် ဒုတိယမ္မိတောင်းပန်ပါတယ်။
ကျွန်တော်ကတော့ အခြားလူတွေလည်း ဒီလို စည်းလုံး ညီညွတ်မှုနဲ့ စေတနာစိတ်တွေကို မြင်စေချင်လို့
သတင်း အဖြစ် ထည့်လိုက်ရတာပါ။
ဒီသတင်း ကို ထည့်ခဲ့တာ ပါခဲ့တာတွေ ဟာ ပို့ပေးသူ ကမ်းဝေး ကိုသာကျေးဇူးတင်ကြပါလို့ ကျွန်တော်လည်း ကိုကမ်းဝေးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
သတင်းရေးတာ လည်း ကို ကမ်းဝေး ပါတယ်ဆိုတာပြောဖို့ ကျန်ခဲ့ပါတယ်။
နောက် ဓါတ်ပုံ ကိစ္စ ကလည်း ခက်နေလို့ ကျွန်တော့်ကိုတောင် ဆရာမ ဆူးဆီဓါတ်ပုံ
သူတောင်းဖို့ပြောပါသေးတယ်။ နောက် နေမကောင်းတဲ့ ကြားက ဓါတ်ပုံရှာ ပြီး ဂျာနယ်တိုက်ကို
ကို ကမ်းဝေးသွားခဲ့ပါတယ် ။ပို့ပြီးကြောင်းလည်း သူပဲ ဖုန်းဆက်ပြောပါတယ်။
ပြီးတဲ့ရက် ဧရာဝတီ နဲ့ မှုခင်း ဂျာနယ်တိုက်တွေက ကျွန်တော့်ကို ဒီ သတင်း ပါမယ်လို့ဖုန်းနဲ့ ပြောတာ သိခဲ့ရပါတယ်။
ခုလို သိအောင် တင်ပေးတဲ့ ဆရာ ချစ်ရင်ထူးနှစ် ကို လည်း အထူးလေးစား ကျေးဇူးတင်ပါကြောင်း။
အလှူသတင်းလေးကြားတော့လည်း … တို့ ရွာသားတွေရော စာဖတ်သူတွေပါ .. အတော်သဒ္ဓါတရားကောင်းကြပါလားလို့ ပြန်ပြီး မုဒိတာပွားရပါတယ် ။
ယုံကြည်စွာလှူဒါန်းသူတွေရဲ့ စေတနာက … နောက်ခြေလှမ်းတွေအတွက် … အားအင်တွေဖြစ်စေပါလိမ့်မယ် …. ။ နောက်လုပ်မယ့်အလှူများမှာလည်း အတူပူပေါင်း ပါဝင်ပါဦးမယ် ။
အဲတော့ …. အနောက်ဆုံးမှာ ..အတည်ပေါက်နဲ့ .. နောက်ထားသလိုပါပဲ … ။
၁၂သိန်းဆိုတော့ … ကျန်တဲ့ ပိုက်ဆံက ဘယ်ရောက်သွားပါလိမ့် … ။ ပထမအကြိမ်အလှူကောက်ခံရငွေက တဆယ့်သုံးသိန်း ရှစ်သောင်းပါ ။ ဒါ့ပြင် ဦးဆောင်သူများထဲမှာ ရွှေတိုက်စိုးလည်းပါခဲ့ပါသေးတယ် … ။ ပါဝင်ကူညီသူတွေထဲ လေးပေါက်နဲ့ အီးတီတို့ရဲ့ ပါဝင်အားဖြည့်မှုတွေကလည်း ..တကယ့်ကိုအကျိုးပြုခဲ့ပါတယ် ။ မသေချာ မရေရာပဲ … ဘယ်သတင်းထောက်က … ခပ်တည်တည်နဲ့ ဖြီးလိုက်ပါလိမ့် …. ။
ဆင်ခြေပေးတာတော့ မဟုတ်ပါဘူးကျနော့်ရဲ့ ပေ့ါလျှော့မှုပါ
ကျနော့်စိတ်ထဲ (12)သိန်းပဲ ထင်နေတာရယ်….
ပြီးတော့ အလှူပါ ပါဝင်ကြတဲ့ ကိုရွှေတိုက်တို့.ကိုအီးတီတို့ လေးပေါက်တို့
ပထမတစ်ကြိမ် အလှူမှာ ပါဝင်ခဲ့တဲ့ ဦးဆောင်သူများနဲ့
အေးဗျာ ..ဆရာမ ရေ တောင်းပန်ပါတယ်ဗျာ
ကျွန်တော် ဆရာမကို အလှူရက်က ပြန်ခါနီး ဆရာမရေ နာေ၇းကို လှူတဲ့ ငွေ အမောင့်ကို
ကမ်းဝေးကိုပြောပြလိုက်ပါလို့ ကျွန်တော်တို့ အတိအကျ မသိလို့ပါလို့ ဆိုတဲ့ အခါ ဆရမကလည်း
ခုမှားယွင်း သွားတာ အရမ်း စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ် ။ ကျွန်တော်က အဲ့ ဒီ အပိုင်းကို ကွက်လပ်ထားခဲ့တာပါ။ နောက် ကူညီသူတွေနာမည် မထည့်လိုက်ရတာ …
အားလုံး ကိုပဲတောင်းပန်လိုက်ပါတယ် ခက်တာက ကျွန်ောတ်တို့က ဆက်သွယ်မှု ဝေးနေတာ ကြောင့်ပါ
အဲ့ ဒီရက်က ကျွန်တော်က အိမ်မဲမှာ ကိုကမ်းဝေး ကရန်ကုန်မှာသူကလည်း ဖျားနေ…
ကိုကမ်းဝေး နဲ့ ဆရာထက်ရေ … စိတ်ထဲ ဘယ်လိုမှ မအောက်မေ့ပါနဲ့ … ။
ပထမဆုံးဖတ်လိုက်ရတဲ့အချိန် အေးအေးမွန်ဆိုတော့ …ကိုယ်ရွာထဲကလည်း မဟုတ်ပဲ … ဂျာနယ်လစ်တစ်ယောက်တော့ ..လေသံကြားဖမ်းတရားနာပြီအမှတ်နဲ့ … ရေးလိုက်တာပါ … ။
ငွေအမောင့်ကွာတာကို … ထည့်ပြောရတာကလည်း … မမြင်ရ ၊မကြားရပဲ .. လှူဒါန်းနေသူတွေရင်ထဲ .. သံသယ၀င်သွားမှာမျိုးကြောက်လို့ပါပဲ … ။ ကောက်ခံရသမျှ တပြားမကျန် ဘာအသုံးစရိတ်မှ မနှုတ်ပဲ … လှူဒါန်းခဲ့တဲ့အကြောင်း လိပ်ပြာသန့်ချင်လို့ပါ ။
ကိုကမ်းဝေး နဲ့ ဆရာထက်ရေ .. ပါဝင်ကူညီသူတွေကိုဖြည့်စွက်ရတယ်ဆိုတာကလည်း … ဂုဏ်ဖော်နာမည်ကြီးချင်တာမျိုးမဟုတ်ပဲ … တစိတ်တ၀မ်းထဲပူးပေါင်းခဲ့လုပ်ဆောင်ခဲ့သူတွေနဲ့ တသားထဲလို့ .. ခံယူထားလို့ပါပဲ … ။
တောင်းပန်စရာမလိုတဲ့ ကိစ္စမို့ … .. ဒီတိုင်းလေးပဲ … နားလည်ပေးပါနော် ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ။
ထပ်ထပ်ပြီး ပီတိပွားရပြန်ပါတယ် ခင်ဗျား..
ဒီသတင်းလေး ကြားရင်ဖြင့် ကားပေါ်က ရွာသူရွာသား သယ်ရင်းများ ရဲ့ ပျော်ရွှင်တဲ့ မျက်နှာလေး ကိုလွမ်းမိတယ်။ အတိတ်ကို ပြန်ရောက်သွား သလိုပဲ။